Did You Know?: October 2017
9-Year-Old's Korean Cover Engsub "Color of the Wind" From "Pocahontas" W...
Posted by THAN HAN at 11:57 PM0comments
Myanmar textile International also want painting on cotton meeting with chief designer of golden sand and the seller
မြန်မာနိုင်ငံက ချည်ထည်တွေ နုိုင်ငံတကာမှာလည်း ရှိစေချင်ပါတယ်ချည်ထည်တွေပေါ်မှာ ပန်းချီရေးဆွဲ ချုပ်လုပ်ရောင်းချသူ ဒီဇိုင်နာ မရွှေသဲဝါနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ – မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် နိုင်ငံတကာကပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်လာတာများပြား ပြီး ခေတ်လူငယ်တွေကလည်း ပြည်ပနိုင်ငံကဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုသာအထင်ကြီး ဝတ်ဆင်လာတာတွေ၊ တန်ဖိုးထားတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကလည်း နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပစ္စည်းဆိုပြီးဂုဏ်ယူစေချင်တာကြောင့် မြန်မာ့ချည်ထည်တွေကို ပန်းချီပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာဘရန်းတစ်ခုအနေ နဲ့ ရပ်တည်ချင်တာကြောင့် မြန်မာဝတ်စုံတွေကို ကနုတ်တွေ၊ ဒီဇိုင်းဆန်းတွေကိုရေးဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သူက ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်လောက်က စတင်ပြီး ပန်းချီတွေရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဝတ်စုံတွေကိုထုတ်လုပ်တာတော့ သုံးနှစ်လောက်သာရှိသေးတာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးချည်ထည်ပေါ်မှာ ပန်းချီတွေကို ရေးဆွဲတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာတွေပါလိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှ သည်လိုလက်မှုပညာ ဟန်းမိတ်တွေကို လူတွေပိုပြီးသိလာတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သာမက နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာပါ မြန်မာဘရန်းတွေနေရာတစ်ခုရလာအောင်ပြုလုပ်ချင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အထည်တွေအပြင် လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုပါ ဟန်းမိတ်တွေပြုလုပ်ပြီး လူလတ်တန်းစားတွေဝတ်ဆင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ရောင်းချနေတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သည်လိုဟန်းမိတ်တွေပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဖောက်နေတဲ့ ဒီဇိုင် နာမရွှေသဲဝါနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ အရင်ဆုံး အစ်မနာမည်နဲ့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းလေးအကြောင်းကို ပြောပေးပါဦး။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အစ်မနာမည်ကတော့ မရွှေသဲဝါလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ ကော်တွန်တွေပေါ်မှာ ပန်းချီဆွဲတာတွေလုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ပြီးအလက်စရစ်တာတွေ၊ ပုံဆွဲဖို့အတွက် ဒီဇိုင်နာတွေကို ပုံဆွဲကတ်လေးတွေကိုထုတ်လုပ် ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ အစ်မအနေနဲ့ မြန်မာဝတ်စုံတွေအပေါ်မှာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ဘရန်းတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပေးပါဦး။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အစ်မကအရင်တုန်းက ပန်းချီစဆွဲကတည်းကလုပ်ချင်တာပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုိုးရီးယားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို အရမ်းလွှမ်း မိုးတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ တစ်ခေါက်ပေါ့ အစ်မသင်တန်းတက်တယ်။ သင်တန်းတက်တာက အစ်မနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနမှာ သင်တန်းတက်တယ်။ သင်တန်းတက်တာက အစ်မနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနမှာ သင်တန်းတက်တယ်။ အဲသည်မှာ သူများနိုင်ငံကနေ ကိုယ့်နုိုင်ငံကို ထိန်းချုပ်ဆယ်ဆိုရင် ကာချာကို အရင်ဆုံးလုပ်တယ်ရှင့်။ အဲ့သည်မှာ အစ်မကျကတော့ မကြိုက်ဘူး။ အစ်မက အဲသည်အချိန်မှာ မြန်မာဝတ်စုံကို ဘယ်လိုမျုးလှအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင် သူတို့ ပြည်ပနုိုင်ငံတွေက စိတ်ဝင်စားမလဲ အစ်မက လည်း ပြန်လည်ထိုးဖောက်ချင်တယ်။ အဲသည်လိုရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် အစ်မက မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ ချည်ထညတွေပေါ်မှာပဲ မြန်မာပန်းချီတွေကို ရေးဆွဲတယ်။ အဲဒါလုပ်တဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က အစ်မက မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်တဲ့ပစ္စည်းကို သူများနိုင်ငံကိုသိစေချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်ပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူတို့ထိုးဖောက်သလို ကိုယ်ပြန်ထိုးဖောက်ဖောက်ချင်လုို့ပါ။
မော်ဒန်။ ။ ကိုယ်ပိုင်ဘရန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ထုတ်နေတာဆိုတော့ ပြည်ပနုိုင်ငံတွေကို ပြန်ပြီးတင်ပို့ရောင်းချတာတွေရောရှိလား
မရွှေသဲဝါ ။ ။ လက်ရှိတော့ ပြည်တွင်းမှာပဲရောင်းချနေပါတယ်။ VE-STIGE Gift & Souvenirs တွေမှာတင်ရောင်းပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ပို့နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအများကြီးဆက်သွယ်နေပါတယ်။ အခုဆို စင်ကာပူကအစ်မတစ်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ် ပြီးတော့ စင်ကာပူမှာလည်း စတင်ရောင်းချနေပါတယ်။ နောက်ပြီး အစ်မကြီးတစ်ယောက်က ပြောထားတာတော့ရှိတယ်။ သူ စပွန်ဆာပေးမယ်ပေါ့။ ပြင်သစ်ကိုပို့ပေးမယ်ပေါ့။ အဲသည်လိုဟာလေးတွေနဲ့လည်း အစ်မချိတ်ထားတာပေါ့။ အစ်မဘက်ကတော့ မြန်မာမှုတွေကို ပိုပြီးသိအောင်ထပ်လေ့လာနေပါတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ ရောင်းချနေတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေရော သိလို့ရမလားရှင့်။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ ရောင်းချတဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ အစ်မအမြင့်ဆုံးက ကျပ် ၃၀,ဝ၀ဝ ပဲရှိတယ်ရှင့်။ ပန်းချီဆွဲပြီးသား ဝမ်းဆက်ကို အကုန်လုံးမှ ကျပ် ၃၀,ဝ၀ဝ ပါ။ ဘာလို့ အဲသည်ဈေးနဲ့ ရောင်းလဲဆိုတော့ အစ်မရဲ့ target က လူလတ်တန်းစားတွေကို ရည်ရွယ်တာပါ။ အဲသည်လို လူလတ်တန်းစားတွေဝတ်နိုင်ဖို့ကို ဈေးကိုချပေးထားတာပါ။ ကျပ် ၃၀,ဝ၀ဝ ဆိုပြီး။ ပြီးတော့ ၂၀,ဝ၀ဝ ကျော်တန်ရှိတယ်။ အစားစားပဲပေါ့။ အမျိုးသား ရှပ် ကျတော့ အစ်မ ၁၈,ဝ၀ဝ နဲ့ ရောင်းပေးတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ အစ်မအနေနဲ့ အထည်တွေအပြင်လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုပါ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ထုတ်တယ်ကြားတယ်ရှင့်။ အဲသည် အကြောင်းလေး ပြောပေးပါဦး။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အဲဒါကျတော့ အစ်မကအရင်တုန်းကတည်းက ပန်းချီဆွဲတာအပြင် မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ ကျောက်တွေရဲ့ ပါဝါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ပြီးတော့အရမ်းလည်း သူ့ရဲ့ပါဝါတွေက လူကိုအရမ်းအကျိုးပြုစေတာကို အဲသည်အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံကထွက်တဲ့ ကျောက်တွေကို ဟန်းမိတ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ဆီကပစ္စည်းတွေကို တကယ့်ကို ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ဝတ်စေ ချင်တယ်။ ပြီးတော့ အစ်မ The Rich Gem မှာ လုပ်တုန်းကဆိုရင် သိန်းရာချီတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့။ အဲဒါတွေကို သူဌေးတွေပဲ ဝတ်နိုင်ကြတယ်။ အစ်မကငွေနဲ့ metal နဲ့ကိုအဆင်ပြေတာသုံးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောက်အစစ်ကိုသုံးမယ်။ အစ်မတို့အားလုံး ဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့။ အဲသည်အချက်နဲ့ ရတနာတွေကို ဟန်းမိတ်တွေလုပ်တာ။ ပြီးတော့ အစ်မကဟန်းမိတ်လုပ်တာတွေ၊ ဒီဇိုင်း တွေဖန်တီးရတာတွေကို ဝါသနာပါတယ်။ အဓိကကတော့ နိုင်ငံကလူတွေကို ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့လှလှပပကျော့ကျော့ မော့မော့လေး ဖြစ်စေချင်တာပါ။
မော်ဒန် ။ ။ အထည်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်ယူလဲ။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အစ်မကတော့ ပန်းချီဆွဲတဲ့လူ ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဆိုတော့ အချိန်ကတော့ limit မရှိဘူး။ အဲသည်တော့ အစ်မက ၂၄ နာရီလုံး အလုပ်လုပ်ရတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ တစ်နာရီအတောအတွင်းလည်း ပြီးချင်ပြီးသွားနိုင်တယ်။ စိတ်အားထက်သန်ရင် ထက်သန်သလိုပြီးတယ်။ တော်တော်များများကို တစ်ယောက်တည်းလုပ်တဲ့ဟာတွေမှာအလုပ် တော်တော်များများပြီးတာက အရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ်။ ပုံဆွဲတယ် ပြီးရင်ထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုလုပ်တယ်။ အဲသည်တော့ အလွန် ဆုံးဆို နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ အစ်မ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုပြောပေးပါဦး။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အစ်မ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ ပန်းချီစဆွဲတာကတော့ ၂၀ဝ၇၊ ၂၀ဝ၈ မှာစတင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ အစ်မ သူများဆီမှာဝန်ထမ်းလုပ်တယ်။ အဲသည်မှာလုပ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့် ရဲ့ပန်းချီ လေးကို အစ်မအရမ်းအောင်မြင်ချင် တယ်။ အဲဒါကြောင့် အစ်မဒီဇိုင်းဘက်ကိုကူးတယ်။ အဲသည်လိုကူးမှ အစ်မပန်းချီတွေကိုပြသခွင့်ရှိမှာလေ။ အစ်မရိုးရိုးပန်းချီဆွဲတောတွေကိုမပြချင်ဘူး။ ဖက်ရှင်နဲ့ ပန်းချီကိုပေါင်းချင်တယ်။ အဲသည်အတွက်ကြောင့်မို့ သည်ဟာကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်လောက်ကစလုပ်တယ်။ အခုဆိုရင် နှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့။ အခုမှ နည်းနည်းလူသိလာတယ်။ နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာတွေကပါလုပ်လာတဲ့အတွက်လည်း လူပိုသိလာတာပေါ့နော်။ ဆွဲခဲ့တာကတော့ အစ်မ ၂၀ဝ၇ ကစပြီးဆွဲခဲ့တာပါ။
မော်ဒန် ။ ။ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေရောရှိလား။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အခက်အခဲက ဘာတွေကြုံရလဲဆိုတော့ ကိုယ်ကသူများလုပ်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်မလုပ်တဲ့ပြဿနာပါ။ ပြီးတော့ အစ်မတို့ ဆီမှာ ကစပြီးတော့ founderလုပ်ပြီး စွန်ဦးတီထွင်တဲ့သူတွေကအရမ်းကို မအောင်မြင်ကြသေးတဲ့အချိန်မှာအစ်မက ဘက်ဂျက်တွေအရမ်းများလို့ မိဘချမ်းသာလို့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လိုပြောမလဲ ရာထူးကြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် က နေကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို ပြောင်းချင်တာ။ အစ်မတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဲဒါဆိုတော့ ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတယ်။နာမည်ကြီးတွေလုပ်တဲ့ဟာကမှ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ဟာလို့ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲသည် လိုပန်းချီဆွဲတာတွေက အစ်မစလုပ်တာ။ အဲသည်လိုတွေပေါ့။ အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ဟာတွေလည်း လုပ်ရတယ်။ သူများကြိုက်သော်ရှိ မကြိက်သော်ရှိ လက်ခံတဲ့သူတွေကလက်ခံတယ်။ အဲဒါကြောင့်သူများတွေ အများကြီးတိုက်ခိုက်လည်း အစ်မကတော့မခံရဘူး။ သူများတွေ တိုက်ခိုက်တာတွေ၊ ဝေဖန်တာတွေကတော့ တော်တော်ခံနိုင် တယ်။ အရမ်းတော့ပင်ပန်းတယ်။ ပင်ပန်းတာကို အမေကတော့မကြည့်ရက်ဘူးလေ။ အစ်မကတော့ ခေါင်းမာတော့ ဆက်လုပ်နေတာ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လက်ခံနေကြပါတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ ဒီဇိုင်နာတွေအတွက် ပုံဆွဲကတ်တွေထုတ်ပြီး ရောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေး ပြောပေးပါဦး။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ ပန်းချီဆွဲတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့။ အဲသည်လို ပန်းချီဆွဲတဲ့သူမှာဆွဲတတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အစ်မအတွက်ကတော့ အခက်အခဲမရှိဘူး။ လူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ငယ်ငယ်တုန်းကဆွဲသလိုတော့မဟုတ် ဘူး။ ပန်းချီသင်တန်းကိုလာတဲ့ သူတွေမှာ သူတို့ဆွဲထားတဲ့ပန်းချီပုံတွေမှာ skill မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းကတော့ မိန်းကလေးပုံဆွဲတတ်ကြတယ်။ ပန်းချီဆွဲရင် ခေါင်းကဘယ်လောက်၊ ရင်ကဘယ်လောက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာကဘယ်လောက်ဆိုပြီးရှိတယ်။ အခုကတ်မှာကျတော့ အချိုးအစားတွေက ချပြီးသားဆိုတော့ သုံးတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေလည်း ဘယ်အင်္ကျီဖြစ်ဖြစ်သုံးနိုင်တယ်။ ဖက်ရှင်စိတ် ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အခြေခံကျတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ အတွန့်လေးတွေ၊ လက်အစိတ်အပိုင်းတွေပြောင်းနိုင်အောင်လို့ လက်တွေ၊ ဖိနပ်တွေကအစ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သည်ကတ်ရှိတာနဲ့ သူတို့ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုအချိန်မရွေးဆွဲနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ သည်လိုဒီဇိုင်းသင်တန်းတွေကလည်း ဈေးအရမ်းကြီးတယ်။ အဲသည်တော့မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဘက်ဂျက်မရှိတဲ့သူတွေသင်တန်းမတက်ဘဲ ဒါကိုဆွဲနိုင်အောင်လို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ အစ်မအနေနဲ့ မြန်မာဘရန်းတစ်ခုဈေးကွက် ထိုးဖောက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်တယ်ထင်လဲ။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အစ်မတို့ အဓိကအားဖြင့် မီဒီယာပိုင်းတွေလိုအပ်တယ်။ ပြီးတော့ အစ်မတို့ နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင် သူတို့ယဉ်ကျေးမှုကအရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ အဲသည်အတွက်ကြောင့် အစ်မအခုလိုက်ချိတ်ဆက်နေရ တာကျတော့အစ်မကသံရုံးတွေမှာ ဘယ်သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲ၊ ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ၊ အဲဒါတွေကိုလိုက်လေ့လာနေတယ်။ စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ အစ်မနဲ့လုပ်ငန်းအတူတူ လုပ်နေတဲ့အစ်မဆိုရင်လည်း တအားကူညီတယ် ။ သူဆိုရင်လည်းအရမ်းကို နိုင်ငံခြားမှာ စပွန်ဆာပေးတဲ့နေရာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုရင် လည်း အစ်မအဲဒါမျိုးတွေနဲ့ ထိုးဖောက်တယ်။ အခုအစ်မဈေးကွက်ကိုလေ့ လာလိုက်တော့ အစ်မပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တဲ့ သူတော်တော်များများက နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်နေတယ်။ အဲသည်အတွက် သူ့နိုင်ငံမှာ တင်ရင် အစ်မကအချိန်တစ်ခုပေးပြီး ကွာလတီကောင်းကောင်း အဲသည်လို လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးလက် ခံလာကြမှာပဲ။ ဈေးနှုန်းကလည်းသင့်တင့်ရမယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဝတ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေဖြစ်နေရမယ်။ အဲဒါကိုပန်းချီပေါ့။ အဲဒါကို သူတို့သေချာပြနိုင်မယ်ဆိုရင် အစ်မထင်တယ် မြန်မာပြည်ဈေးကွက်တွေသာမက နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုပါ ထိုး ဖောက်လာနိုင်မှာပါ။
မော်ဒန် ။ ။ အခုခေတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင် သိပ်ပြီးအထင်မကြီးကြဘူးပေါ့။ အဲသည်အပေါ် အစ်မအမြင် လေး ပြောပေးပါဦး။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အစ်မ ဖြစ်ချင်တာက အဲသည်အတွက်ကို ပြည်ပဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်တာပါ။ ဘာလို့ဆိုတော့ အစ်မတို့နိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ စိတ်က နိုင်ငံခြားပစ္စည်းဆိုအရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲသည်တော့ အစ်မအင်္ကျီက နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွား မယ်။ အဲဒါနိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားကြည့်လိုက် သူတို့ အလိုလိုလက်ခံလာလိမ့်မယ်။ အနုပညာရော၊ ကိုယ်တတ်တဲ့အတတ် ပညာရော တခြားဗဟုသုတတွေရော အဲဒါတွေကိုပေါင်းပြီး ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြောနေရတာပေါ့။ အဓိကအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ရင် မြန်မာဝတ်စုံကြိုက်တယ်လေ။ အဲသည်လိုမျိုး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမြတ်နိုးတတ်အောင် အစ်မ တို့အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့။ အစ်မက အစ်မ မြန်မာဆိုတာကိုအရမ်းထက်သန်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အစ်မ ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ပန်းချီဆွဲတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကဆွဲတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံက ဆွဲနိုင်လဲသိတယ်မဟုတ်လား ဂုဏ်ယူပြီးဝတ် ကြ အဲသည်လိုမျိုးပေါ့။
မော်ဒန် ။ ။ အခုနောက်ပိုင်းချည်ထည်တွေလည်း အရမ်းရှားလာတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းချည်ထည်တွေရှားလာပြီးဝယ်ယူလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုရင်အစ်မအနေနဲ့ ဘယ်လိုအထည်တွေကိုအစားထိုးပြီးချုပ်သွားမလဲ။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အစ်မက ချည်ထည်ရှားလာရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင် အစ်မတို့ချည်ထည်ရှားတယ်ဆိုတာ သူတို့ရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနိမ့်ကျပြီးပေးတယ်။ အစ်မ အခုစဉ်းစားထားတယ်။ ဝမ်းတွင်းဘက်ကနေ ချည်ထည်တွေထုတ်ပေးတယ်။ အစ်မ ကလည်း ကိုယ်ပိုင်ရက်ကန်းရုံတွေမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ အဲသည်တော့ သူနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ သူ့ဆီက ထွက်တဲ့ချည်တွေကို အစ်မကိုပဲပေး တယ်။ သူတို့ကိုလည်း သင့်တော်တဲ့ဈေး နှုန်းတွေပေးထား ပြီးသားလေ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ် ယောက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း ခြောက်လလောက်ကြိုပြော အဲသည်လိုမျိုးလုပ်တယ်။ တခြားရက်ကန်းတွေဘာ တွေအားလုံးကိုလည်း လေ့လာထားတယ်။ အစ်မကတော့ ကိုယ့်လိုင်းနဲ့ ကိုယ်ဟန်းမိတ်ပေါ့နော်။ ချည်တွေကိုရက်ပြီး လုပ်ချင်တာ။
မော်ဒန် ။ ။ အစ်မဘရန်းကို ပြည်ပပို့မယ်ဆိုတော့ အခွန်အခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစ်မထင်မြင်ချက်တွေကို ပြောပေးပါဦး။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ အခွန်အခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျတော့ အစ်မတို့ အခုလုပ်နေတာကျတော့ SME လည်းဖြစ်တယ်။ သည်လိုမျိုး နိုင်ငံ ခြားကိုပို့မယ်ပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ အမှန်တရားတိုင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင် သည်လို SME တိုင်းမှာ SME တစ်ယောက်ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် လုပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ သည်အခွန်တွေကိုပေးဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ဆောင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်။ သူတို့ ကိုလည်းမညာချင်ဘူး။ ဒါ SME လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါနဲ့တန်ရာတန်ရာဆောင်မယ်ရတယ်။ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆို အစ်မကပြောမှာပဲ။ အစ်မတို့ကငွေမည်းကို ငွေဖြူဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလဲ မဟုတ်တော့သိအောင်တော့ ပြောပြရမှာပေါ့။ အစ်မတို့ရဲ့ တကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုလည်းအခွန်အခကိုရှောင်တာမဟုတ် ဘူးဆောင်မယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲသည်အချိန်ကျရင်လုပ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင် ပြောပေးပါဦး။
မရွှေသဲဝါ ။ ။ ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းကကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ ပြီးတော့ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရာနဲ့ပဲ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲပါ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရာနဲ့အလှဆုံးဖန်တီးပါ။ အဲဒါ ဆိုရင် အစ်မတို့က သူများဆီကလိုချင် တပ်မက်တဲ့လောဘတွေလည်း မဖြစ်တော့ဘူး။ အစ်မတို့က ဈေးနှုန်းလည်း အရမ်းမကြီးတဲ့ ချည်ထည်တွေကို အလှဆုံးဝတ် ဆင်ပါ။ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲပါပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
မော်ဒန် ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Oh...Lovely My Piglet and Pooh!
Rather blustery days ahead.
Posted by THAN HAN at 11:34 PM0comments
Despacito - Luis Fonsi ft.Daddy Yankee (French Version | Version França...
Posted by THAN HAN at 11:28 PM0comments
Dawn of the Xiaoyuyu three-year-old child singing crying world parents heart!
By making ten, on April 3, 1999 in Guizhou travel Lim Haw called Pan regrettable incidents were small. Designated the population who carry more thanacable car cable car accident in 14 of the 35 passengers were killed. It containsa2-year-old child in the survivors.42 parents had lifted their little child had abraded wound. But child felt that his parents died 2. This has happened because the singer sweeps Han Hong stroke events based singer Han Hong days bright composingasong track. The song holds the fans were able to shake.4child boy was adopted by the acceleration profileSo Its daybreak 天亮 了 rated video presentation. Not seem to be carried away fromXiaoyuyu three-year-old child displays and presentations.
Bright day lyrics
Han Hong - "dawn"
Making it drizzle It'safall wind so lingering Let me think of their pair of helpless eyes in the beautiful scenery accompanied by the place I hearaloud noise Shinto Valley is that fall and then see my father's face He used his shoulders hold my rebirth starting point darkness tears covered with eyes do not leave do not hurt I see my father and mother so far away I am in this strange world do not know what the future risk To keep his hand tightly to tell my mother I hope there will be to see the sun out of my mother laughed the dawn of the red - "dawn of the"
It'sanight in the sky where the stars are in the dream I see my momaman in the world to learn to be strong you do not leave do not hurt me see my mom and so on so far away I am in this strange world I would like him Buildabeautiful garden I want to hold his hand tightly and tell my mother and hope that there will beasun out of the sun to see the sun out They laugh
Dawn of the LRC lyrics
[ar: Han Hong]
[by: little rain]
[00: 00.00] Han Hong - "dawn"
[00: 10.00] Production: drizzle dripping
[00: 18.00] It wasafall wind so lingering
[00: 24.00] reminds me of their helpless eyes
[00: 31.51] in the place where the beautiful scenery is accompanied
[00: 38.16] I heardaloud noise
[00: 45.00] It was the autumn that could not see my father's face again
[00: 51.99] He holds the starting point of my rebirth with his shoulders
[00: 59.21] The tears in the dark are covered with eyes
[01: 05.83] Do not leave do not hurt
[01: 13.28] I see my mom and dad go so far
[01: 17.00] leave me in this strange world
[01: 20.50] Do not know what risks will be in the future?
[01: 27.23] I want to hold his hand tightly
[01: 30.80] Mom told me that there might be
[01: 34.30] When the sun came out, my mother smiled
[01: 45.25] Han Hong - "dawn"
[01: 55.35] It wasalittle night in the sky
[02: 01.53] I saw my mom inadream
[02: 08.20] A man must learn to be strong in the world
[02: 15.14] You do not leave do not hurt
[02: 21.78] [02: 50.35] I see my mom and dad go so far
[02: 26.10] [02: 53.91] left me in this strange world
[02: 28.33] [02: 57.45] I would like to buildabeautiful garden for him
[02: 36.26] [03: 04.10] I want to hold his hand tightly
[03: 07.83] Mom told me that there might be
[02: 43.56] See the sun coming out of the sun
[03: 11.29] They saw the sun out and they laughed
1999 ယခုလိုဆယ်လပိုင်3းရက်နေ့မှာ ကွေ့ကျိုးရှိ မာလင်ဟော်လို့ အမည်ရတဲ့ ခရီးသွားအပန်ဖြေနေရာမှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူဦးရေထက် ပိုမိုသယ်ဆောင်ခဲ့သော ကောင်းကင်ကေဘယ်ကား မတော်တဆမှုကြောင့် ကေဘယ်ကားထဲရှိ ခရီးသည် ၃၅ ဦးအနက် ၁၄ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ လွတ်မြောက်လာသူများထဲမှာ အသက် ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးတစ်ဦး ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းရဲ့ မိဘ ၂ ပါးဟာ ခလေးငယ်ကို ချီမြှောက်ထားခဲ့တာကြောင့် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာပဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခလေးငယ်လေးရဲ့ မိဘ ၂ ပါးကတော့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်ပျက်ဟာ အဆိုတော်ဟန်ဟုန် 韩红 စိတ်ကိုရိုက်ခတ်ခဲ့တာမို့ အဖြစ်ပျက်ကို အခြေခံပြီးအဆိုတော် 韩红 ဟာ 天亮了 ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးဟာ ပရိတ်သတ်များစွာရဲ့ စိတ်ကိုကိုင်လှုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းခလေးငယ်လေးကို ဟန်ဟုန်က မွေးစားခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်
ဒါ့ကြောင့် 天亮了 ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟန်ဟုန်ရဲ့ ဆိုဟန်နဲ့ မဟုတ်ပဲ ရှောင်ယွီ့ယွီ့ဆိုတဲ့ ခလေးငယ်လေး ဆိုဟန်နဲ့ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
看到太阳出来妈妈 笑了 天亮了
နေမင်းကြီးထွက်လာချိန်မှာအမေဟာပြုံးခဲ့တယ် 天亮了 မိုးလဲလင်းသွားပြီ
That was an autumn day where clouds were unwilling to part
It makes me remember their helpless eyes
Right at that picturesque, beautiful place
I heardamighty thundering shake the valley
Right at that autumn day, no longer can I see my dad's face
He used his shoulders to lift me into the beginning of my new life
In the darkness, tears clung to both eyes
Don't want to leave, don't want to hurt
I saw my mum and dad just go away like this
Leaving me in this world of strangers
Not knowing whether the future will hold any hazards
I want to tightly grab onto his hand
Mum tells me that there will still be hope
I see the sun rising, and mum smiles. The day is lightening.
This isanight with scatterings of stars
I see my mum in my dream
A person alone in the world has to be strong
Don't go, don't hurt
I see my mum and dad just like this go away
I want to build himabeautiful garden
Seeing the sun rise, they smile. The day is lightening.
Han hong - Tian liang liao
na shi yi ge qiu tian feng er na me chan mian
rang wo xiang qi ta men na shuang wu zhu de yan
jiu zai na mei li feng jing xiang ban de di fang
wo ting dao yi sheng ju xiang zhen che shan gu
jiu shi na ge qiu tian zai ye jian bu dao ba ba de lian
na shi ta de shuang jian tuo qi wo zhong sheng de qi dian
hei an zhong zhan man liao de yan
ni bu yao li kai bu yao shang hai
wo kan dao liao ba ba ma ma jiu zhe me zou yuan
liu xia wo zai zhe mo sheng de ren shi jian
bu zhi dao wei lai huan hui you shi me feng xian
wo xiang yao jin jin zhua zhu ta de shou
ma ma gao su wo xi wang huan hui you
kan dao tai yang chu lai ma ma xiao liao tian liang liao
zhe shi yi ge ye wan tian shang su xing dian dian
wo zai meng li kan jian wo de ma ma
yi ge ren zai shi shang yao xue hui jian qiang
wo kan dao ba ba ma ma zhe jiu zhe me zou yuan
wo yuan wei ta jian zao yi ge mei li de hua yuan
kan dao tai yang chu lai tian liang liao
看到太阳出来 他们笑了 天亮了
kan dao tai yang chu lai ta men xiao liao tian liang liao
Posted by THAN HAN at 9:18 PM0comments
Labels: Life Style, Love, music
Need Creative Idea for you!
Posted by THAN HAN at 9:15 PM0comments
Oh...Lovely my Piglet!
Rather blustery days ahead. Where are you going, Piglet?
Th-th-th-that's what I'm asking MYself! Where? (becomes airborn) Who-who-wh-wh-wh-whoooops! (Pooh catches up) P-P-P-P-P-P-P-Pooh!
And (grabs scarf) what do you think you will answer yourself?
So cute and especially care free.
Ahhh an afternoon gone by in the life of child.
Posted by THAN HAN at 7:43 PM0comments
How to do Shwe Yoke Lyaw Franchise?
ရွှေရုပ်လွှာ Franchise နယ်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ခွဲဖွင့်ခြင်သူတွေ အတွက်တဲ့ဗျ?
Hnin Lun Eain was live.
Posted by THAN HAN at 7:34 PM0comments
Posted by THAN HAN at 6:05 PM0comments
https://youtu.be/HRTaRBHzkG0 List of performances:
Top -5Blind Auditions of the Voice 2017!
The People who can win! Best Moments EVER
Posted by THAN HAN at 2:05 PM0comments
Description: Thisistilt Showreel 2016. Nominated at NYCDFF 2017
Posted by THAN HAN at 2:04 PM0comments
Luna playsatraditional Korean string, " Gayageum", and one of the popular Youtubers!
Rock ကိုတီးပြသွားတာ ခုမှကြားဖူးတယ်​။အရမ်းမိုက်​တယ်​ ကြည့်​လိုက်​ ခင်​​ဗျား တို့ကြိုက်​သွားမယ်​...။
AC/DC- Back in Black Gayageum cover by Lun Guns N’ Roses- Sweet Child O’ Mine Gayageum ver. by Luna
Metallica- Enter Sandman Gayageum ver. by Luna Lynyrd Skynyrd- Free Bird solo Gayageum ver. by Luna
Rolling Stones-Paint It Black Gayageum ver. by Luna Bob Dylan-All along the watchtower Gayageum Luna ver Santana-Smooth Gayageum ver. Luna
Business request: info@lunaxmusic.com Follow me : https://telegram.me/lunaleemagazine
Posted by THAN HAN at 12:47 PM0comments
Sonnet unveiled Off-Grid Mobile Mesh Network!
In comparison to other off-grid communication brands, Sonnet has the following unparalleled advantages:
1. Sonnet is 40% cheaper than the second cheapest brand;
2. Internet-sharing: If one Sonnet within the network has Internet, it can share that with the entire network;
3. Sonnet powers all forms of data transmission: Not only text, but also voice, image, and ALL files;
4. Sonnet powers 16 mesh hops, far more than all the other brands;
5. Multiple devices can connect to each Sonnet;
6. Sonnet works with your computer and ALL Wi-Fi enabled device;
7. Sonnet can function asastand-alone relay tower;
8. Sonnet is rated IP66, dust-tight and water-resistant;
9. Sonnet is extensible with the USB port. It supports many USB devices such as webcam, USB drive, GPS dongle, 3G/4G dongle, audio dongle, etc. ;
10. Sonnet hasaSMA connector, so you can connect your own directional antenna to increase the point-to-point range even further.
We are proud to say Sonnet is the first to bring these amazing features to the world!
11. Sonnet has local regulation adaptation function which allows it to legally operate in ALL countries;
InDemand Sonnet: World's Most Advanced Mobile Mesh Network
Send text, voice, images, and GPS locations on your phone without cellular reception or satellite.
Sonnet is the world's most advanced off-grid mobile mesh network. The device wirelessly connects to your smartphone to let you send text, voice message, images, and share GPS locations to any other Sonnet users up to several kilometers away with no cell tower, no satellite, and no subscription of any kind.
Your phone is dependent on the mobile network, and they can't keep you connected when the mobile network is unavailable or unreliable, such as when you are:
Traveling abroad: network unreliable or very expensive to use
On the other hand, walkie-talkies work anywhere. However, they are:
Bulky and cumbersome: some walkie-talkies literally feel like bricks that you carry around
Complex and unintuitive: tuning and setup require before you can use it
Very low-quality audio only: no text, no images, just bad audio, which often leads to miscommunication
Sonnet is an Off-the-Grid communication device that lets you use your smartphone asasuper advanced walkie-talkie that can send:
There's no frequency to tune and no channel to set. Just connect and start chatting! Use the Sonnet App in the same way as any other instant messengers to send:
Public messages to any Sonnet users in range (yes, you can block spammers)
Sonnet App runs directly within your smartphone's browser so you don't need to download or install any app!
Sonnet is completely off-the-grid and operates independently of any network infrastructure. This means that Sonnet will let you stay in touch with your friends and teammates no matter where you are.
Sonnet has local frequency&power adaptation function which makes the same unit of Sonnet legal to operate in all countries.
The typical point-to-point range between two Sonnet devices is5km (approximately3miles). This range can be up to 15 km (9 miles) if there is line-of-sight, such as when the sender and receiver are on top of two mountains.
In addition, Sonnet comes withaSMA connector, so you can connect your own directional antenna to increase the point-to-point range even further!
Sonnet's mesh network dramatically increases the effective range beyond point-to-point range by relaying data through other deices. With Sonnet, data can be relayed up to 16 times to achieveamaximum range of 80 km (50 miles)!
There is absolutely no subscription fee when you use Sonnet. You can send as many messages as often as you want!
If one device has internet connectivity, then the entire network can share it!
Place Sonnet inacar or base where internet is available, then you can access internet in the backcountry by carrying another Sonnet!
(To be rolled out asasoftware upgrade in Early 2018).
Sonnet isn't justacommunications device, it isafull featured computer! It supports many USB devices such as webcam, USB drive, GPS dongle, 3G/4G dongle, audio dongle, etc. This extensibility lets you use Sonnet inamyriad of creative ways!
The Sonnet App comes with offline maps so you’ll be able to get directions and view points of interest without Internet connection. You can even leave virtual breadcrumbs on the offline map so you can retrace the path back to the origin.
Sonnet lets you keep track of other members on your team in real time. It can also log down the locations in regular intervals, allowing you to re-trace your steps in case you ever get lost in the wild. This greatly enhances the efficiency of communication and safety for your team.
Panic Button (SOS Messages)
In the case of emergencies, Sonnet App comes withapanic button. Long-press the button for5seconds will activate the SOS mode, broadcasting your current GPS location and your distress message to all Sonnet users in range.
Sonnet is equipped witha4000 mAh lithium polymer battery and it comes withaUSB port, so you can charge your smartphone with it. Sonnet can fully charge most smartphones on the market.
We take your privacy very, very seriously. Asaresult, we have taken care to make Sonnet as secure as possible. All communications done with Sonnet are end-to-end encrypted with AES (256-bit). In addition, Wi-Fi connections between Sonnet and your smartphones are protected with WPA/WPA2.
Sonnet featuresarugged design that makes it well-suited for outdoor use. It is rated IP66, which means that it is dust tight and water resistant. This allows you to bring the Sonnet with you no matter which adventure you are on.
Sonnet not only works with your smartphones, but all your Wi-Fi enabled devices as well! Sonnet hosts its own Wi-Fi access point, so you can connect your laptop, tablet, as well as other devices to it just like your home router!
At Sonnet Labs, we aim to democratize mobile communication with technologies that enable smartphones to communicate without relying on centralized infrastructures. Founded byagroup of avid outdoor enthusiasts, we initially built the Sonnet just for ourselves asaway to stay in touch with friends when we are out hiking. We quickly realized that the mission is much greater than that: by making long-range mesh networking technology that is secure, easy-to-use, and accessible to everyone, we can lay the foundation for creatingatruly open, decentralized digital communication network, built for and powered by the people.
We are based in Toronto, Canada, and our team comprises of amazing people who have worked in Motorola, Honeywell, and Hai'er.
The Sonnet will be shipped worldwide with tracked shipping. Due to variations in shipping rates across the globe, the tier prices do not include shipping fees. These fees are separately calculated based on your shipping country and will be automatically added when you complete your pledge on Indiegogo.
Any applicable import duties, taxes, or tariffs are the responsibility of the backer. Please be aware of your local import procedures before choosing to back our project.
$210 USD+ Shipping~ $315 (33% Off)
SONNET EXTENDED FAMILY PACK
5 Sonnet devices for you and your family! Comes with5USB Charging cables and5USB Power Adapter.
$89 USD+ Shipping~ $126 (29% Off)
One pair (two) Sonnets so you can keep in touch with you and your friends. Comes with2USB Charging Cables and2USB Power Adapter.
$129USD+ Shipping~ $189 (31% Off)
3 Sonnet devices for you and your family! Comes with3USB Charging Cables and3USB Power Adapter.
$399 USD+ Shipping~ $630 (36% Off)
A LOT OF SONNETS!
10 Sonnet devices so you can keep EVERYONE around you connected! Comes with 10 USB Charging cables and 10 USB Power Adapter.
Posted by THAN HAN at 1:59 AM0comments
9-Year-Old's Korean Cover Engsub "Color of the Win...
Myanmar textile International also want painting o...
Despacito - Luis Fonsi ft.Daddy Yankee (French Ve...
Xiaoyuyu 3-year-old girl, singing crying the world...
THE VOICE | BEST ROCK SONGS in The Blind Auditions...
Luna playsatraditional Korean string, " Gayageum...
Six-year-old aircraft 'genius' becomes pilot for a...
Day of Vesak celebrated at the UN Headquarters in ...
apanese boy4attempted jump failed watch what his...
#SingChina 2016~ Lucia Wu 吴映香~ ကိုယ့်အိပ်မက် "我的...
Sing China 2016 Winner ~ Folk Prince Jiang Dunhao ...
အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ခန်းစာ First day of class
Chilli crab fromavending machine, anyone?
Facebook is down for required maintenance right no...